देउवालाई प्रधानमन्त्री अफर : जोडिने भयो नेकपा ! « Ok Janata Newsportal
देउवालाई प्रधानमन्त्री अफर : जोडिने भयो नेकपा !
काठमाडौं । यतिबेला संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाले अहिले बहस गरिरहेका छन् । हरिकृष्ण कार्कीको बहिर्गमनपछि सपना मल्ल प्रधानलाई इजलासमा भित्र्याइएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको बताउँदै आएको नेकपा दाहाल–नेपाल समूह यतिबेला सडक संर्घषमा छ । सोमबार मात्रै दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अनुशासन उलंघन गरेको भन्दै तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन भनेको छ ।
यता, ओली पक्षले पनि दाहाल–नेपाल पक्षमा लागेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही सिफारिस गर्दै आएको छ । दुवै पक्षले एकले अर्कालाई विष बमन गरिरहेका छन् । एकअर्काका कमजोरीलाई जनता समक्ष ओकली रहेका छन् । पछिल्लो अवस्था हेर्दा नेकपाको विभाजनले कम्युनिष्ट राजनीतिमा आवद्ध नेपालका मात्रै होइन, छिमेकी मुलुकका नेताहरुलाई समेत घोचेको छ । पार्टीको एक शक्ति सडकमा र अर्को सत्तामा रहँदा अहिले नेकपालाई गिजोलिरहेको छ । सबैको ध्यान सर्वोच्चतिरै देखिएको छ ।
कसरी हुनसक्छ सहमति ?
अहिले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई मध्यावधि निर्वाचन होस् वा सरकारमा जान होस् सहज अवस्था देखिएको छ । तर, कांग्रेसलाई पनि सरकारमा जान त्यति सहज छैन । पार्टीभित्रै दुई गुट रहेको कांग्रेसले एकले अर्कालाई रिझाउन निकै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति इत्तर पक्षका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई रिझाउनु पर्ने देखिन्छ । सभापति देउवाले पनि रामचन्द्र पौडेललाई रिझाउन शुरु गरिसकेका छन् । अहिले बेलाबखत देउवा–पौडेलबीच अनौपचारिक संवाद शुरु भएको छ ।
यसअघिको निर्वाचनमा ठूलो हार व्यहोरेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन जान सहज ठानेको छैन । ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा अपेक्षित उपलब्धि हासील गर्न असहज हुने कांग्रेसको ठहर रहेको स्रोत बताउँछ । नेकपा निर्वाचनमा जाँदा आफ्नै दुई पक्षबीच तालमेल गरेर गयो भने कांग्रेसलाई संकट छ । त्यसैले कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन चाहेको स्रोत बताउँछ । देउवाले गरेको आग्रहमा पौडेल पनि सहमति नजिक पुगेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कांग्रेसलाई सुम्पिएर नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशनका निम्ति लबिङ गर्ने तयारी गरेको नेकपाका केही नेता बताउँछन् । पार्टीको महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल पक्षले पनि स्वीकार गर्ने बुझिएको छ । नेकपालाई पुनः एकीकरण गर्ने अभियानमा लागेका ओलीले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिनसक्ने स्रोत बताउँछ । संसद विघटन संविधानविरुद्ध रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशले बताउँदै आएपछि अबको विकल्प ओलीका लागि पार्टी एकता नै रहेको जानकार बताउँछन् । निर्वाचनमा एक्लाएक्लै जाँदा पराजय व्यहोर्नुपर्छ भन्ने बुझेका नेकपाका दुवै पक्ष मिल्नका लागि अबको नयाँ रणनीति सहमतिको सरकार रहेको समेत राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।